Warshadaha Shiinaha iyo Warshadaha Albaabada ee Glass Frameless Gilass30 iyo alaab-qeybiyeyaasha | Kinzon
Albaabka Furniinka Glass Frameless Kinzon30
Albaabka isku-laaban ee galaaska-Kinzon30 waa la ruqseeyay oo wuu gudbay culayska dabaysha, culayska dhibcaha iyo tijaabooyinka saamaynta. Astaamaha aluminiumka iyo qaababka dariiqa iyo furitaanka ee albaabka isku laabma dhalada Frameless-Kinzon30 waxay ka kooban yihiin qalab cimilo-caddeyn ah. Albaabka furitaanka galaaska oo aan loo kala bixin - Kinzon30 wuxuu leeyahay dammaanad wax soo saar 10 sano ah.
Albaabka isku laabista dhalada oo ah furida-Kinzon30
Fiilooyinka galaaska furitaanka galaaska Furniinka-Kinzon30 waxay ka kooban yihiin galaas badbaado adag. Albaabka isku laabista muraayadda furan-Kinzon30 wuxuu waafaqsan yahay shuruudaha CE ee adag ee loo qoondeeyay / PSB ee Singapore / Gost ee Russia.
Nidaamkii ugu dambeeyay:
furfurnaan la'aan iyo guddi galaas kastaa wuxuu u furan karaa si shaqsi ahaaneed nadiifinta fudud, hawo nadiif ah iyo iftiinka qorraxda, wuxuuna kuxiran yahay aragti muuqata.
astaanta magdhowga ee dusha sare waxay hagaajin kartaa farqiga u dhexeeya daaqadda iyo saqafka si looga dhigo nidaam siman.
laba nooc oo dib loo hagaajiyo, mid ayaa kor loogu qaadayaa astaanta magdhowga, mid kalena hoos u dhigista astaanta magdhowga.
giraangiraha waaweyn ee garaacista leh waxay gacan ka geysan karaan culeyska in kabadan 100KGS muraayad kasta waxayna sameyn karaan muraayadaha dhalada si habsami leh
Orodyahannada weligood boodaan:
oo leh qaybta caaga ah ee taageerada balaastigga ah, muraayadaha dhalooyinka ayaa si qunyar socod ah ugu soconkaro xitaa marka ay marayaan godka furitaanka rollersadana waligood ma boodaan.
Albaabka isku laabista dhalada oo ah Fure-Kinzon30 ayaa loo adeegsadaa SS304 dhammaan geesaha rukunka si ay u taageeraan muraayadaha waaweyn ee galaaska.
Guddiyadu waligood kama dhacaan wadada:
taageer gaar ah oo ku leh dariiqa sare ayaa iska ilaalin kara muraayadaha dhalooyinka inay ka dhacaan marka ay furan yihiin.
Ballaca ugu sareeya waa 900mm oo joogga ugu sareeya waa 3000mm galaas kasta.
u isticmaal daboolka caaga ah ee dareeraha ah ee caaga ah si aad uga fogaato qatarta iyo qaabka jaranjarada loo yaqaan 'stair-step' wuxuu ku gaari karaa kufiican nidaamka.
Albaabka isku-laabashada dhalada oo ah furida-Kinzon30 majiro farqi u dhexeeya profileyaasha raadraaca iyo astaamaha galaaska oo ay ka kooban yihiin waxyaabo gaar ah.
Hore: Albaabka Mashiinka ee Glass Frameless Kinzon30plus
Xiga: Qalabka Aluminium Alaring Window Ares50
Glass Window Door Kinzon10
Albaabka Mashiinka ee Glass Frameless Kinzon30plus